Vaovao - tombontsoa azo avy amin'ny vy vy
Fotoana fohy taorian'ny nifandraisako voalohany tamin'ny dite dia nampahafantatra ahy amina vilany vy vy japoney ny namana iray, ary nahasarika ahy avy hatrany ilay tsiro hafahafa. Fa tsy haiko ny tombony azo amin'ny fampiasana azy, ary mavesatra loatra ny vilany vy. Tamin'ny fahalalako tsikelikely ny setrin'ny dite sy ny fahalalako ny lanonana dite dia fantatro tsimoramora fa tena mahasoa tokoa ny fanaovana dite amin'ity vilany vy ity! Vilany vy Ny zavatra tsara dia ny manatsara tanteraka ny kalitaon'ny rano sy manatsara ny tsiron'ny dite malefaka. Hita indrindra amin'ireto teboka manaraka ireto:
Ny tombony azo avy amin'ny fanaovana dite amin'ny kalitaon'ny rano manova vilany
1. Vokatry ny lohataona an-tendrombohitra: ny sosona fasika eo ambanin'ny ala any an-tendrombohitra dia manivana ny rano lohataona ary misy mineraly soritra, indrindra ny ion-by sy ny klôro klôro. Mamy ny kalitaon'ny rano ary io no rano mety indrindra amin'ny fanaovana dite. Ny vilany vy dia afaka mamoaka ion-by ary afaka mandray ion klôroza amin'ny rano. Ny rano andrahoina amin'ny vilany vy sy loharano eny an-tendrombohitra dia misy vokany mitovy.
2. Fiantraikany amin'ny hafanan'ny rano: ny vilany vy dia afaka mampitombo ny teboka mangotraka. Rehefa manao dite dia ny rano no tsara indrindra rehefa ampiana vaovao. Amin'izao fotoana izao dia tsara ny fofon'ny lasopy dite; raha ampangotrahina im-betsaka izy dia esorina tsy tapaka ny entona miempo (indrindra ny gazy karbonika) ao anaty rano, ka "antitra" ny rano ary hihena be ny tsiron'ny dite. Ny rano izay tsy mafana dia antsoina hoe "rano malefaka" ary tsy mety amin'ny fanaovana dite ao anaty vilany vy. Raha ampitahaina amin'ny tekoara tsotra, ny vilany vy dia manana fitarihana hafanana marobe. Rehefa mafana dia azo hatsaraina ny rano any ambany ary ny hafanana sy ny hafanana manodidina hahatratra ny tena mangotraka. Rehefa mamoaka dite manitra toy ny "Tieguanyin" sy "Tea Pu'er Old" dia tsy maintsy avo ny mari-pana amin'ny rano, ary ny rano "namboarina amin'ny fotoana rehetra" dia hahatonga ny lasopy dite hanana kalitao tsara ary tsy hahomby amin'ny fahombiazan'ny dite. fahafinaretana farany;
Rehefa mahandro rano na manao dite amin'ny vilany vy isika, rehefa mangotraka ny rano dia hamoaka ion-byval be dia be ny vy hanampiana ny vy ilain'ny vatana. Matetika ny olona mifoka vy trivalent amin'ny sakafo, ny vatan'olombelona dia tsy mahazo afa-tsy 4% ka hatramin'ny 5%, ary ny vatan'olombelona dia afaka mifoka manodidina ny 15% ny ion ferric, ka tena zava-dehibe izany! Satria fantatsika fa ny fisotroana dite dia mahasoa ny fahasalamantsika, maninona isika no tsy afaka manao tsara kokoa?
Farany, tiako ny mampahatsiahy anao ny fikojakojana sy ny fampiasana ny vilany vy: ny ketrika vy dia hihamamiratra sy mora diovina aorian'ny fampiasana maharitra. Ny hodi-tany dia matetika azo soloina amin'ny lamba maina, noho izany dia hiseho tsikelikely ny vy manjelatra. Toy ny vilany fasika volomparasy sy dite Pu'er izy io. Manana ny fahavelomany ihany koa izy io; tsy maintsy tazonina ho maina aorian'ny fampiasana azy. Aza manasa ny vilany mafana amin'ny rano mangatsiaka na mianjera avy amin'ny toerana avo, ary tokony homarihina fa tsy tokony ho maina ny vilany raha tsy misy rano.